Goa, paradisa any India | Vaovao momba ny dia
Mariela Carril | | India, Inona no ho hita
Goa Iray amin'ireo toerana itodiana tropikaly malaza indrindra izy io India. Tanjon'ireo mpanao kitapom-batsy maro mitady amoron-tsiraka tsara, exoticism, kolotsaina ary fahasamihafana samihafa. Ity fanjakana India ity dia akaikin'ny Ranomasina Arabo ary mankafy a toetr'andro mafana amin'ny ankamaroan'ny taona, na dia tsy maintsy mitandrina tsara aza ianao amin'ny orana sy ny hafanana be ao anatin'ny volana vitsivitsy.
Androany dia tsy maintsy miroso mankany Goa isika ary avy eo manomana ny diantsika manaraka any India.
2 Fizahan-tany Goa
Araka ny efa nolazainay, fanjakana any India izy io izay mitazona mihoatra ny 3.700 kilometatra toradroa ny velarany, misy morontsiraka maro sy amin'ny faritra tropikaly akaikin'ny Ranomasina Arabo. Ny andro mafana indrindra dia mitranga amin'ny Mey, arahin'orana monja izay maharitra hatramin'ny septambra.
Mizara ho azy ny Goa Goa Avaratra sy Goa atsimo y ny renivohiny dia ny tanànan'i Panaji. Ny Portiogey dia nanjanaka ity faritra India ity tamin'ny fiandohan'ny taonjato faha-XNUMX mba hifehezana ny varotra zava-manitra, nandresy ny Silamo sy ny mponina. A) Eny, Tonga renivohitry India Portiogey i Goa sy ny toby fiasan'ny fanjakana any amin'ny faritra. Ny landy sy ny seramika avy any Chine, ny perla ary ny haran-dranomasina avy any Persia, ny karazana Maleziana dia avy eo handalo ny toeran'ny Goa ...
Tamin'ny fahatongavan'ireo navigatera holandey dia nanomboka nihena ny herin'ny Portiogey tao Goa. Io toe-javatra io dia voan'ny valanaretina iray, nifandona tamin'ny andriana teo an-toerana ary farany, taorian'ny namindrana ny renivohitra tany Panaji ankehitriny, dia nibodo an'i Goa ny anglisy tamin'ny fiandohan'ny taonjato faha-XNUMX. Tsy nomba ny atsy na aroa i Portugal nandritra ny Ady Lehibe Faharoa ka sambo alemanina maro no hita teto nitady fialofana.
Ary farany nahazo ny fahaleovan-tena avy tany Grande-Bretagne i India 1947 y entonces Nangatahina tamin'ny fomba ofisialy i Portugal mba hamerina an'i Goa. Tsy nety i Portugal ary avy eo ny fihetsiketsehana fanoherana azy ireo ary nanomboka nanery azy ireo hiala ireo sakana. Ny zava-drehetra dia nifarana tamin'ny ady sasany tamin'ny 1961, nandao ny Portiogey ary lasa iray amin'ireo fanjakana ao India i Goa.
Rehefa avy nilaza izany rehetra izany aho, dia hitako fa ilaina foana ny mahafantatra zavatra momba ny tantaran'ny faritra kasainao hovangiana, andao hojerentsika izay atolotra an'ireo mpandeha. Voalohany indrindra, inona no hotadiavina amin'ity faritra India ity: Ranomasina Ny morontsiraka vitsy an'isa indrindra dia hita ao South Goa ary eto ny tsara indrindra dia ny morontsiraka Arossim sy Utorda, akaikin'ny tanànan'i Majorda. Ao anatin'ny Goa Avaratra dia Baga, Anjuna ary Calangute.
Amin'ny morontsiraka rehetra any Goa dia afaka manao fanatanjahan-tena amin'ny rano toy ny ianao jet ski, paragliding, antsitrika, snorkeling na mitaingina akondro mahafinaritra na mitsidika toeram-pambolena zava-manitra, izay no antony nahatongavan'ireo eropeana tany India tamin'ny voalohany. Ohatra, ny Sahaki Spice Farm na ny Parvati Plantation, ilay toeram-pambolena dipoavatra mafana manokana any Ponda. Raha mandeha irery ianao dia andramo mandeha aloha satria tonga ny vondrona voarindra ary feno izany.
Azonao atao ihany koa kayak amin'ny renirano Aguada na rafting amin'ny reniranon'i Mandovi na Valpoi. Toerana malaza eo amin'ny Beach Baga dia ny St. Anthony's Bar. Misy ny andrana masoandro, latabatra misy labozia, mozika, karaoke ary mahafinaritra be. Eo akaikin'ny trano fisakafoanana ao amin'ny Britto, toerana iray hafa soso-kevitra. Rehefa alina ny alina dia velona daholo ny backpackers ka miomàna hifanerasera.
Panaji, renivohitr'i Goa dia iray amin'ireo toerana tsy azonao adino. Aiza ny Goa taloha, fantatra tamin'ny fotoana iray ho toy ny Roma avy amin'ny Estary. Eto no hahitanao fiangonana taloha (Basilica an'ny Bom Jesus na ny Fiangonan'i Santa Catarina, izay lehibe indrindra sy be mpitsidika indrindra), efitrano fandraisam-bahiny, tranombakoka, tranobe mpanjanatany ary galeriana zavakanto. Azonao atao ny mamakivaky ny Quarter Latina, miaraka amin'ireo tranony tahaka ny Portiogey taloha, tsara handefasana sary amin'ny Instagram. Eny tokoa, Goa taloha Lova Iraisam-pirenena izany.
Tendrombohitra sy tantara, fa koa ny fiainana dia. Azonao atao ny mitsidika ny Valan-javaboary Mollem hihaona amin'ny panther, bera ary serfa, na ny Toeram-piarovana Bibidia ao Bhagwan Mahavir. Misy karazam-borona 200 mahery ary eo am-pototry ny havoanan'ny Tandrefana Andrefana io toerana io, ary azo tsidihina isan'andro manomboka amin'ny 8 ora sy sasany ka hatramin'ny 30:5 hariva. Afaka manao izany koa ianao jereo fesos raha mandeha sambo fitsangantsanganana mankany amin'ny Nosy Lehibe ianao na any amin'ny ranon'ny Candolim, Calangute na Sinquerim. Agence fitsangatsanganana an-tsambo tsara amin'ny John's Dolphin Tour, miaraka amin'ny filozofia "tsy misy feso, tsy misy karama".
Ranomasina, tantara, bibidia ary asa tanana. Aiza? Ao amin'ny Tsenan'i Ingo tsy mahazatra. Ny niandohan'ity tsena ity dia misy ifandraisany amin'ny fahatongavan'ny alemanina iray antsoina hoe Indo izay nanolo-kevitra ny hanokatra tsena parasy, karazana bazaar asabotsy ao Arpora. Maharitra enim-bolana isan-taona, amin'ny ririnina, ary hitanao ny zavatra kely rehetra eo anelanelan'ny akanjo lava, rojo hippie, kojakojam-pisakafoanana ary fanosotra, sns. Misy DJ mivantana ary raha tsy tianao ny vahoaka dia afaka mandeha alina ianao.
Goa dia 590 kilometatra miala an'i Bombai, iraika ambin'ny folo ora amin'ny làlana ary adiny iray amin'ny fiaramanidina fotsiny. Hevitra tsara ny hanombohana amin'i Panjim ary ny fijanonana ao amin'ny distrika manan-tantara dia hevitra tsara eto. Raha manam-bola ianao dia misy trano fandraisam-bahiny mahaliana rehefa miasa amin'ny trano fanjanahantany taloha. Raha tianao ny mijanona eo amoron-dranomasina, na any avaratra na any atsimo dia misy trano isan-karazany. Raha tianao ny Airbnb dia misy ihany koa ny tolotra eto.
Ny idealy dia ny mandany 10 andro mitety an'i Goa, mankafy, manam-potoana fa tsy mihazakazaka. Manofa moto ianao ary manana fizakantena bebe kokoa ihany koa, ankoatry ny safidy tsara indrindra hahafantarana ny zava-drehetra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » Tsangatsangana » Inona no ho hita » Goa, paradisa any India